अध्यादेश शीतलनिवासमा रोकिएपछि गोविन्द केसी बालुवाटार गए ! – Everest Dainik – News from Nepal
अध्यादेश शीतलनिवासमा रोकिएपछि गोविन्द केसी बालुवाटार गए !
पत्र फिर्ता नभए शिक्षामन्त्रीलाई पदबाट हटाउँछु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, कात्तिक २४ । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगी केसीले प्रधानमन्त्री देउवालाई छिटो राष्ट्रपतिबाट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।